Kismaayo News » Safiirka Maraykanka ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah bixiyey
Safiirka Maraykanka ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah bixiyey
Kn: Safiirka Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa waraysi u badnaa arrimaha Jubbaland bixiyey, waxaana halkan idiinkugu soo gudbineynaa waraysigaasi.
Wareysiga waxaa qaaday Cabdinaasir Saxansoxo.
Su’aal- Sidee ayaad u aragtaa Nidaamka cusub ee Amniga dalka Soomaaliya gaar ahaan doorka Jubaland?
Jawaab-Nidaamka cusub ee amniga ee dalka Soomaaliya waxaan u arkaa tilaabo hor loo qaaday, hogaaminta dowlada dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada , gaar ahaan dowlad goboleedka jubaland miiska ayeeyna isugu imaadeen si ay u dejiyaan qorshe ciidan qaran oona isku dhafan isla markaana dabooli kara baahida guud ahaaneed ee dalka iyo weliba maamul goboleedyada wadajir ayeyna dalka soomaaliya wax looga qaban karaa inagoona la garab taagan caawinta aan caawino waxaa ay yagleeli karaan ciidan quwad leh dalkana xasilini kara.
Su’aal-Maxaad nooga sheegi kartaa dadaalka Maraykanka ugu jiro la dagaalanka Al shabaab iyo argagixisada.?
Jawaab-Dadaal xoogan ayaan ugu jirnaa sidii aan u xakameyn laheyn falalka Guracan ee Xagjiriinta ay ka wadaan Sooomaaliya iyo weliba Bariga Africa, waxaan ku dadaaleynaa sidii aan u dhisi laheyn ciidan awood leh isla markaana aan u qalabeyn laheyn, Si ay u difaacan dadka Soomaaliya iyo dalkoodaba taa oo ah waajibka saaran ciidanka qaranka ee dowlada Soomaaliya, dhanka kalana ay garab istaagaan ciidamada AMISOM oo mudo taban sano ah dalka Soomaaliya u jooga sidii ay u xasilini lahaayeen dalka.
Su’aal-Sidee u aragtaa shirkii lagu soo gabagabeeyey dalka Ingiriiska ee ku saabsanaa heshiiskii dhisida ciidanka xooga dalka Soomaaliya.
Jawaab-Heshiiskaas waxaa uu ahaa mid ay u dhammaayeen intii joogtay London oo ay ugu horeyso beesha caalamka, waddamadad deeqaha bixiya ay soo wada dhaweeyeen. arin wanaagsan ayeey u aheyd madaxweyne Farmaajo iyo wasaaradiisa difaaca iyo weliba madaxda dowlad goboleedyada dhammaan ee shirka london goobjooge yaal ka ahaa, taasoo muujineyso wadajirka madaxda dalka iyo weliba xoojinta arimaha amniga, inagana waxaan ka caawineynaa dalka Soomaaliya xoojinta awooda ciidanka ee mustaqbalka dhow.
Su’aal-Dowladaada waxaa ay ku dhawaaqday in ay qorsheyneyso in ay ciidamo keento Soomaaliya, Jubbaland ma qeyb ayey ka tahay goobaha aad ciidamada geyneysaan, maxaana hadeer keenay baahidaas? iyadoona weli aad xasuusatid duulaanki loogu magacdaray “Black hawk downn” ee sagaashameyadii?
Jawaab-Waxaan kuu xaqiijinayaa, Mareekanka ciidan kama joogo dalka Soomaaliya, waxaa laga yaabaa in hadalkaaga uu daba socdo go’aamo u madaxweyne Trump soo saarey kuna amray ciidamada dalka Mareekanka in ay weeraro cirka ah ku qaadaan Alshabaab, tana waa qeeb kamid ah garab istaagida ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo AMISOM.
Su’aal-Hadalkaaga waxaan u fahmay in aad diidantahay in dalka Soomaaliya ciidamo Ameerikaan ah ay saldhigyo ku leyihiin waqti xaadirkaan?
Jawaab-Maya sharciga ahaan ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya ma ahan kuwa dagaal iyo hawlgal u jooga, waxa ay dalka u joogaan keliya waa in ay tababaro u fidiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Su’aal-Ciidamada Mareeykanka uu qorsheynayo in uu Soomaaliya u soo diro, ma waxaa sabab u ah soo shaacbixista Kooxda Daacish ee Soomaaliya ku sugan?
Jawaab-ISIS waxaa ay qalqal ku tahay xasiloonida guud ahaan aduunka maadaama hada ay noogu jirin qorshaheena koowaad laakin marwaliba la dagaalankooda waxaan siinaa tixgelinta koowaad.
Su’aal-Madaxweynaha Mareeykanka waxaa uu soo saaray go’aan uu ku joojinayo soo galootiga muhaajiriinta lix wadan oo muslimiin ah oo ay kamid tahay dalka Soomaaliya maxaad arantaas ak leedahay?
Jawaab-Waxaan si xooggan ugala shaqeyneynaa Dowlada Soomaaliya arrimaha muhaajiriinta iyo sida ay dawlada Soomaaliya ula shaqeyn laheyd in dowlada Mareeykanka ku xaqiijin karto warqadaha socdaalka, si loo hubiyo diiwaangelinta warqadaha shaqsiga uu wato taasna wadanka Mareeykanka waxaa ay siineysaa in ay ku qanacdo warqadaha ay muwaadiniinta Soomaaliya wataan arintaasna waan ku guda jirnaa?
Su’aal-Hadeer dadaalkiina xaguu maraya ee ku aadan sidii lagu xaqiijin lahaa in muwaadiniinta Soomaliyeed ee warqadaha saxda wata ay ku tegi karaan dalka mareekanka?
Jawaab-Wada hadal ayaa inoo socda laaliin go’aanka madaxweynaha uu ka soo saaray dadka soo galootiga ah wali ma uusan dhaqangalin oo waxa ahor istaagay maxkamadaha dalkaasi. Walina dadka Soomaalida waa tagaan Maraykanka haddii ay ahaan lahaayeen kuwa fiisooyin wata iyo kuwa qaxooti ahba.
Su’aal-Shirkii lagu soo gabagabeeyey London waxey u muuqataa in ingiriiska uu hogaanka u qabanyo arrimaha soomaaliya taasi ma waxey ka micno tahay in Mareeykanka ay uga dhamaatay dadaaladii uu ka waday dalka Soomaaliya, doorkiisiina hoos u dhacay.?
Jawaab- Boqortooyada ingiriiska waxaa ay la shaqeyn la leedahay dalka Mareekanka, Soomaaliya hawlaheedana waajib ayaa ka saaran waxaa sidoo kale jira waddamo badan oo garab taagan dalka Soomaliya haddii ay noqon laheyd dhanka amniga, hormarka arrimaha bini’aadannimada waxaana ka mid ah Turkiga iyo Qaramada Midoobey oo door muhiim ah ka ciyaaraya dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Su’aal- Jubbaland waxaad mooda in hormaro la taaban karo ay ku tilaabsaneyso dhanka nabadgelyada amniga iyo hormarka dawlada Mareeykanka maxaa uga qorsheysan garab istaaga dowlad goboleedka jubbaland, sideedna u aragtaan hoggaanka hadda jira ee Jubbaland?
Jawaab- Wada shaqeyn wanaagsan ayaa naga dhexeysa madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe iyo madaxda Jubaaland dhammaan, waxaana hadda inoo socda sidii dalka dowlad goboleedyada ka jira wax loogu qaban lahaa sidaad la socotid madaxweynaha dalka Farmaajo dhawaan ayuu booqday Kismaayo , taasina waa talaabo wanaagsan oo horey loo qaaday.
Su’aal-Su’aasheyda u dambeysa maxaad nooga sheegi kartaa hadii ay jiraan mashruucyo ugaar ah Jubbaland oo aad dooneysaan in aad fulisaan?
Jawaab-Sidaad ka dhawaajisay arrimaha amniga inagoo la shaqeyneyna dowlada Soomaaliya waxaan rajeyneynaa bilaha soo socdo in la heli doono ciidan isku dhafan oo dalka wax ka qaban kara oo gudaha Jubbaland lagu tobarayo, waxaan kalo hormarineynaa dhanka garoomada ciyaaraha ee Kismaayo, goobo xarumo ayan Kismayo ka dhiseynaa sida darjiinooyinka lagu nasto, mashruucyo ayaan Afmadow ka wadnaa sidoo kale mashruucyo dheeraadka dalka wax looga qabanayo ayaan sidoo kale wadna waxaan filayaa Jubbaland in ay ku tilaabsan doonto hormar wacan.
FG : Wareysigani waxa uu ka baxay Radio Kismaayo, moowjadda 90.00 FM ee magaalada Kismaayo.